SLT SPORTS: Sergio Ramos Iyo Gareth Bale Oo Aan Ku Jirin Ciyaartoyda Magaalada Liverpool Soo Gaadhay Iyo Qodobo Kale. | Somaliland Today
← Gerrard Oo Qoomameeyey Inuu Diidey Dallab Ay Real Madrid Ku Doonaysay
SLT SPORTS: Natiijooyinka Kulamadii Xalay La Ciyaaray Horyaalka Qaarada Yurub Iyo Goolashii La Kala Dhaliyay. →
SLT SPORTS: Sergio Ramos Iyo Gareth Bale Oo Aan Ku Jirin Ciyaartoyda Magaalada Liverpool Soo Gaadhay Iyo Qodobo Kale.
(SLT-Madrid)-Kooxda Real Madrid ee la ciyaari doonta Liverpool ayaa soo gaadhay England waxaana ka maqan difaaceeda Sergio Ramos iyo gool dhaliyaheeda Gareth Bale.Bale iyo Ramos ayaa hore u seegay kulankii ay Real Madrid ka badisay kooxda Levante.
Ramos ayaa wali la dhibaataysan dhaawicii ka soo gaadhay kulankii Real Madrid iyo Athletic Bilbao, wuxuuna ku hadhay caasimada Madrid si uu iskugu diyaariyo kulanka Barcelona ee Clasico-da.
Bale ayaa la tacaalaya dhaawac muruqa ka soo gaadhay, wuxuuna seegayaa kulanka Champions Leaquega ee Liverpool ay ku soo dhawn doonto kooxdiisa Mardrid.
Carlo Ancelotti ayaa England ula safray 20 ciyaartoy oo ay ka mid yihiin Varne iyo Benzema oo dib ugu soo laabtay kooxda kadib markii ay seegeen kulankii Levante.
Liiska Ciyaartoyda Real Madrid ee England Soo Gaadhay: Casillas, Keylor Navas ,Pacheco, Varane, Pepe, Marcelo Carvajal, Arbeloa, Nacho, Khedira, Kroos, James, Modric, Isco, Illarra, Medrán, Marcos Llorent, Cristiano Ronaldo, Benzema and ‘Chicharito’ Hernandez.
Frank de Boer: Messi Waa Inuu Dhageysto Macalinkiisa Enrique.
Frank de Boer ayaa sheegaya in madaama Lionel Messi uu yahay xiddiga ugu fiican adduunka inaysan la micno aheyn inuu iska dhegotiro awaamiirta tababarihiisa.
Waxaa la soo wariyay in xiddiga Argentina uu diiday in la bedelo intii ay socotay kulankii La Liga ee ay ka badiyeen sabtidii Eibar.
Tababaraha Barca Luis Enrique ayaanan waxba ka soo qaadin dhacdadaas laakiin De Boer ayaa aaminsan in xitaa ciyaaryahan u weyn sida Messi inay qasab tahay inuu sameeyo waxa loo sheego.
“Waa ciyaaryahanka ugu fiican dunida , waxaana uu sii ahaan doonaa sannado badan” ayuu yidhi tababaraha Ajax oo caawa kooxdiisa ay marti ku tahay Camp Nou kulan ka tirsan Champions League.
“Leo waxa uu sidoo kale heystaa khibrad weyn sidaasi darteed waa uu ogyahay sida ay tahay awoodiisa jidh ahaaneed. Laakiin marka tababaraha uu wax kuu sheego waa qasab inaad dhageysato.”
Louis van Gaal: Waan Soo Qaban Karnaa Chelsea.
Louis van Gaal ayaa sheegay inay weli soo qaban karaan Chelsea oo hogaanka u heysa Premier League.
United ayaa barbaro 2-2 ah la gashay kooxda West Brom xalayto waxaana ay 10 dhibcood ka danbeeyaan koxoda hogaanka heysa ee Blues kuwaasoo ay martigelin doonaan axada soo socota.
LVG ayaa yidhi: “Waa macquul inaan soo qabano Chelsea laakiin waa adag tahay in la yiraahdo sababtoo ah markaas waxaan noqonayaa qof isla weyn. Laakiin wakhtiyo badan ayaan sidaas sameeyay” ayuu yidhi markii la weydiiyay haddii ay soo qaban karaan Chelsea.
“Waa labo dhibcood oo aan luminay. Waxaan qabaa inaan ka fiicneyn West Brom, waana ka niyadjabsanahay natiijada. Labo jeer ayaa gool la inagala hormaray laakiin West Brom ma aysan abuurin fursado badan.
“Waxaan u sheegay ciyaartoydeyda inaan faraxsanaan karin. Waan ku faraxsanahay qaabka aan u ciyaarnay laakiin kuma faraxsani natiijada.”
Messi Iyo Ronaldo Oo Ku Tartamaya Horjabinta Rikoodhka Gooldhalinta Ee Championka
Iyadoo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay ku dagaalamayaan inay kubada cagta u qaadaan heerkii ugu sareysa, rikoodhka gooldhalinta Champions League ayaa ah meeshii ugu danbeysay ee ay ku dagaalamaan.
Labada xiddig ee adduunka ugu fiican ayaa mar kale galaya taariikhda kubada cagta.
Labada xiddig ayaana qarka u saaran inay jabiyaan rikoodhka halyeeyga Real Madrid Raul kaasoo gooldhalinta abid ee Champions League ku haya 71 gool.
Ronaldo waxa uu leeyahay 69 gool halka Messi uu leeyahay 68 gool. Waxaana ay arinta ka soo tagtay haddii waxaana ay isku bedeshay gorma ayaa la jabin doonaa rikoorkaas.
Midkood ayaana ku horumari doona inuu jabiyo rikoodhkaas. Sidaasi oo ay tahay tartanka ka dhaxeeya labada xiddig waxa uu noqon doonaa mid sii socda.
Waa dhif iyo naadir in kubada cagta ay soo saarto labo xiddig oo sidaan ugu xafiiltama garoomada laakiin Messi iyo Ronaldo oo ah cadow la isku dhaariyay ayaa soo bandhigay mid ka mid ah xafiiltanka shaqsiyadeed ee ugu fiicnaa Isboortiga.
Sida Muhammad Ali iyo Joe Frazier ay ugu xafiiltameen feedhka miisaanka culus, John McEnroe iyo Bjorn Borg ay ugu xafiiltameen tenniska, iyo Aryton Senna iyo Alain Prost ay ugu xafiiltameen tartanka baabuurta ee F1. Messi iyo Ronaldo ayaa iyagana ku biiri doona halyeeyadaas.
“Waxaan qabaa inay isku baahan yihiin” ayuu yidhi dhawaan Michael Laudrup oo Barca iyo Real u soo ciyaaray. Isagoo tilmaamay in midba midka kale uu ku dhiirogeliyo inuu horumar sii sameeyo.